Fomba 8 hanolokoloana fiaraha-miasa amin'ny fifandraisana - Fifandraisana
Fomba 8 hanolokoloana fiaraha-miasa amin'ny fifandraisana
Ny finamanana amin'ny fifandraisana dia mety ho zavatra tsara tarehy, saingy tsy tonga ho azy tanteraka foana. Indraindray ny mpivady dia mila miasa mba hamboly azy.
Matetika ny olona dia very hevitra momba ny foto-kevitry ny finamanana ao anatin'ny tontolon'ny fifandraisana. Tsy fantatr'izy ireo ny tena dikan'izany, ny endriny, na ny fomba fandehanana amin'ny fananganana azy.
Ary misy olona tsy mino an'io. Mihevitra izy ireo fa ny olona manome lanja ny finamanana dia nilaozan'ny fitiavana. Aleon'izy ireo milamina amin'ny namana 'marina' toy izay miatrika olana mitokana.
Eto aho hanazava ny atao hoe finamanana, ny maha-sarobidy azy io, ny anjara andraikiny eo amin'ny fifandraisana, ary ny fomba hikolokaranao azy.
Inona no atao hoe fiarahana amin'ny fiarahana?
Ny fiaraha-miasa dia ny maha-orinasa tsara ho an'ilay olona nofidinao hizara ny fiainanao.
Ny mpivady namana tsara dia mpinamana indrindra. Tsy mifankatia fotsiny izy ireo fa tena mifankatia koa. Ary tena faly ry zareo mandany fotoana miaraka.
Manokana fotoana ho an'ny tsirairay izy ireo, ary matetika mizara soatoavina iraisana, fomba fijery iraisana momba izay tsara sy ratsy.
Mety manana tanjona iraisana amin'ny fiainana izy ireo ary vonona hifanampy mba hahatanteraka ireo tanjona ireo.
Ekipa amin'ny lafiny rehetra amin'ny fiainana izy ireo, manomboka amin'ny asa an-trano, hatramin'ny fitaizan-janaka, avelany hidina ny volon'izy ireo ary mifalifaly.
Izy ireo dia afaka manao ny marina amin'ny tsirairay, mampiseho ny tena maha izy azy ary marefo. Tsara fanahy izy ireo, mangoraka ary malemy paika.
Ahoana ny fomba hananganana mpiara-miasa amin'ny namanao.
1. Ataovy loha laharana ny fihainoana.
Ny fifamaliana dia tsy manampy amin'ny fananganana finamanana.
Raha ataonao lohalaharana ny mihaino izay holazain'ny tsirairay fa tsy manandrana mamaky hatrany ny hevitrao, dia azo inoana kokoa fa hanana fifanakalozan-kevitra manorina ianao fa tsy ady hevitra manimba.
2. Vonona ny hanaiky rehefa diso ianao.
Tsy misy marina foana. Hanao fahadisoana ianao ary hanao zavatra tsy mety.
Anisan'ny fiaraha-miasa mahomby ny fanekena izany sy ny fianarana mandray ireo zavatra lazain'ny namanao ho fitsikerana mahasoa fa tsy fanafihana manokana.
3. Mitadiava zavatra mahaliana sy fiaraha-mientana ifampizarana.
Betsaka ny fotoana, ny fifandraisana mahomby dia ny fizarana ny enti-mody sy ny andraikitra hafa. Saingy tsy tokony ho ianao irery no mizara izany.
Mila misafidy mavitrika ianao handany fotoana miaraka amin'ny kalitao. Ary koa amin'ny fandaminana ny alina misy daty, tadiavo ireo hetsika izay azonareo roa miaraka atao.
Ny fivoahana sy ny fihodinana ary ny fahazotoana dia voaporofo fa manampy amin'ny fanamafisana ny fifamatorana mpivady.
4. Manaova fifanakalozan-kevitra mahitsy momba ny zavatra ilainao, ny zavatra ilainao ary ny nofinao.
Ny fahitsiana no fanalahidin'ny fiarahana. Tsy hahazo an'izay tadiavinao sy ilainao amin'ny fifandraisanao mihitsy ianao raha tsy manao ny marina tanteraka ianao ary misokatra amin'izy ireo ny momba ny laharam-pahamehanao.
Aza matahotra ny hitondra ny fanahinao ary mizara izay hitanao ho tsiambaratelo farany lalina indrindra ao aminao. Ny fifampiresahana dia hanampy amin'ny fanamafisana ny fifamatorana.
5. Asehoy azy ireo fa manan-danja aminao izy ireo.
Alao antoka fa fantatry ny namanao ny maha-zava-dehibe ny fiarahan'izy ireo aminao, ary tsy raisinao ho azy ireo izany.
Ary koa fihetsika goavambe izao, mitadiava fomba kely hanehoana azy ireo isan'andro. Tsara sy tsara daholo ny teny, fa ny fihetsikao dia hampiseho azy ireo fa afaka matoky anao izy ireo.
6. Mitandrema amin'ny fiankinan-doha.
Misy tsipika tsara nefa tena lehibe eo amin'ny hoe naman'ny olona iray ary lasa miankina amin'izy ireo.
Tokony afaka mifampiankina ianareo roa, fa tokony mbola afaka hiasa tsy misy azy ireo koa. Raha miankina amin'ny vadinao loatra ianao dia mety tsy ho salama ny fifandraisana.
7. Hanaja ny toerana misy azy ireo.
Niorina izahay fa mila misoroka ny fiankinan-doha ianao, ary ny ampahany lehibe amin'izany dia ny fanajana fa samy manana fiainana ivelan'ny fifandraisanareo ianareo.
Ny lafiny iray hafa amin'ny fananganana finamanana dia ny fahazoana antoka fa samy mitazona ny tombontsoanao manokana sy ny finamananao ianao.
Hamarino tsara fa samy mifanaja ny toerana misy azy avy ianareo ary aza afangaro ny filan'izy ireo mandany fotoana amin'ny olon-kafa ho taratry ny fifandraisanareo.
ny fomba hanampiana namana amin'ny fisarahana
8. Misokatra amin'ny resaka ara-bola.
Aleo lazaina ho marina, ny fampiharana ny fiainana dia ampahany lehibe amin'ny fifandraisana rehetra. Raha miara-manorina fiainana ianao, dia mila mifampiresaka marina amin'ny lafiny ara-bola.
Ifanakalozy hevitra ny raharaha ara-bola ary resaho ny tanjonao. Hamarino tsara fa eo amin'ny pejy iray ihany ianao.
Ny fananana mangarahara ara-bola eo anelanelanao dia hanome anao fiadanan-tsaina ary hanome toky anao fa afaka miantehitra amin'ilay olona nofidinao hizara ny fiainanao ianao.
Fanontaniana napetraky ny mpivady matetika momba ny fiarahana.
Ireto misy valiny vitsivitsy amin'ireo fanontaniana napetraky ny olona matetika momba ny anjara asan'ny fiarahana amin'ny fifandraisana.
F: Inona no tsy itovizan'ny finamanana amin'ny fisakaizana?
TO: Olana iray marobe amin'ireo olona manana ny foto-kevitry ny fiarahana amin'ny fifankatiavana amam-pitiavana ny tsy ahafahan'izy ireo mahita hoe aiza ny andalana eo amin'ny fiarahana sy ny finamanana.
Ary raha tsy hitan'izy ireo ny mahasamihafa azy roa dia miady mafy izy ireo hahatakatra ny anjara asan'ny fiarahana amin'ny fifandraisana am-pitiavana.
Ahoana no ho fantatra raha tena toy ny olona iray U
Ny finamanana dia mety hitondra valisoa mampino, ary ny fifandraisanao amin'ny namanao dia antenaina ho anisan'ny fifandraisana manan-danja sy manan-danja indrindra amin'ny fiainanao.
Fa ny finamanana dia ambaratonga hafa. Tsy voatery hidika izany fa lalina kokoa na zava-dehibe kokoa noho ny finamanana, fa midika kosa ny fanoloran-tena bebe kokoa sy ny fifampiankinana.
Ny namana dia mpiara-miasa aminao amin'ny heloka bevava sy amin'ny fiainana. Ny fiaraha-miasa dia ny fiarahana miasa sy ny fanaovana drafitra fiainana, ny fifampiresahana rehefa mandray fanapahan-kevitra, mifanohana ary manao sorona mba hahasoa ny tsirairay.
Miaraka amin'ny namanao, dia matetika ianao no mandeha amin'ny lalan-kaleha, rehefa eo foana ianao mba hifanohana. Saingy miaraka amin'ny namanao dia misafidy ny hiaraka hanamboatra lalana ianao.
F: Mifamahofaho ve ny fiarahana sy ny fifankatiavana, na afaka samy hanana ny azy roa ianao?
TO: Azonao antoka fa samy manana ny azy roa ianao.
Ny tantaram-pitiavana sy ny firaisana dia zavatra mahafinaritra, ary ampahany lehibe amin'ny fifandraisana. Saingy tsy ampy samirery izy ireo.
Tsy maintsy miara-miasa amin'ny finamanana izy ireo raha toa ka hiasa mandritra ny fotoana maharitra ny fifandraisana.
Izany dia satria tsy hampandeha anao ny simia ara-nofo rehefa mihasarotra ny raharaha. Ny fifandraisana rehetra dia handalo fotoan-tsarotra, ary rehefa mandeha izy ireo, ny tantaram-pitiavana dia tsy fototra mafy orina hanampiana anao handingana azy ireo.
Tokony ho vonona ianao hanohana ny sakaizanao ary ho vonona hanao sorona ho soa ho an'ny fifandraisanao.
Rehefa mandeha ny fotoana, dia hoe raha mbola mankafy ny resak'izy ireo ianao isan'andro, afaka matoky azy ireo, ary manana tanjona iraisana amin'ny fiainana izay hahatonga ny fahasamihafana rehetra, fa tsy hoe hitanao fa manintona azy ireo amin'ny firaisana izy ireo.
F: Ampy ve ny finamanana hanana fifandraisana salama maharitra?
TO: Tsy fanontaniana azoko valiana ho anao io. Zavatra tsy maintsy ho hitan'ny olona tsirairay avy izany.
Fa eny, amin'ny teôria sy amin'ny fampiharana, ny finamanana dia mihoatra noho ny ampy mba hiasa maharitra ary hahasoa ny mpiara-miasa.
Ny tantaram-pitiavana dia manaitaitra, manaitaitra ary afaka mamelatra ny fiainana. Fa ny tena izy dia ho an'ny mpivady maro dia tsy maharitra mandrakizay izany. Ny fihazakazahana am-boalohany ny fitiavana tantaram-pitiavana mafana dia manjavona, fa nosoloina karazana fitiavana hafa.
Fitiavana mifototra amin'ny fifanajana sy ny fifanohanana, ny fahalianana ifampizarana, ny tantara nifampizarana ary ny tena faniriana handany fotoana amin'ny vadinao ary hampifaly azy ireo
Izany dia mihoatra ny ampy fototra ho an'ny fifandraisana salama.
F: Inona avy ireo tombony azo avy amin'ny fananganana finamanana?
TO: Ny fahatsapana fiaraha-miasa matanjaka amin'ny vadinao dia afaka manisy tsy fitoviana lehibe amin'ny fiainanao miaraka. Midika izany fa manana olona hizarana ny zava-drehetra ianao, na tsara na ratsy.
Olona hankalaza ny zava-bitao sy hanohana anao rehefa tsy mandeha tsara ny raharaha. Olona mahalala anao, ary iza fantatrao, ao anaty, ary afaka miresaka zavatra rehetra.
Ny fananganana fiaraha-miasa amin'ny mpiara-miasa dia midika fa samy mahafantatra fa manana vato hifikirana ianao rehefa misavoritaka ny raharaha. Ary, amin'ny fahafantarana fa manana izany fanampiana matanjaka izany ao aorianao ianao, dia samy hahatoky tena ho afaka hivoaka any ianao ary hanangana ny fiainanao amin'ny nofinao.
F: Sarotra ve ny mampivelatra ny finamanana?
TO: Ny fitiavana romantika sy mafana dia mety ho tonga voajanahary kokoa noho ny fiarahana.
Ny fitiavana dia zavatra mety hianjerao haingana sy mora, fa ny finamanana dia tsy zavatra mivoatra mandritra ny alina.
Mila fotoana ny tena hifankafantarana sy hananganana fifampatokisana.
Saingy amin'ny faharetana sy fanoloran-tena be dia be ianao, afaka mahita ny tenanao ao anatin'ny fifandraisana iray izay mamoaka ny tsara indrindra ao aminareo roa ary hijoro amin'ny fitsapana ny fotoana.
Mbola tsy azonao antoka ny atao hoe namana na ahoana ny fananganana azy amin'ny vadinao? Miresaka an-tserasera amin'ny manam-pahaizana momba ny fifandraisana avy amin'ny Relationship Hero izay afaka manampy anao hahalala zavatra. Tsotra.
7 Ny tsy fivadihana dia tena midika hoe misy fifandraisana
Antony 5 manana fifandraisana ara-panahy lalina amin'ny olona iray ianao
Ahoana no fomba hahatongavana ho mpiara-miasa tsara kokoa amin'ny fifandraisana: 15 tsy misy toro-hevitra Bullsh * t!
Manao ahoana ny fitiavana?
ny fomba hamaliana ny fihazonana fihetsem-po
Alice in Wonderland mad hatter teny nalaina
ny fomba fangatahana famantarana an'izao rehetra izao
manao sonia ny mpiara-miasa iray mankahala anao
inona ny mpamaritra anarana telo mamaritra anao indrindra